Nagarik News - भूकम्पले भिरायो बैसाखी
भूकम्पले भिरायो बैसाखी
27 Jan 2016 | 09:18am
मुच्चोक (गोरखा)-भाँच्चिएको खुट्टा पिँढीमा तेर्साएर खाना खाँदै थिइन् सुफला अधिकारी। औंलाले सिता च्याप्दै सकीनसकी मुखसम्म पुर्याउँथिन्। खान खाइसकेपछि सासू आमाले उनको हातबाट थाल लिइन्। धोईपखाली आटामा सुकाइन्। सुफला बैसाखी समातेर धर्मराउँदै उठिन्। एक पाइला सार्न पनि कठिन भइरहेथ्यो उनलाई। वैशाख १२ को भूकम्पले उनलाई अब बैसाखीकै भरमा पूरै जीवन गुजार्न बाध्य पारेको छ।
'पाइला सरे पो, हिँड्थी ! बिचरी,' टहरामा अड्याएको भकारीबाट धान झिक्दै गरेका ७९ वर्षे वृद्धले मलीन स्वरमा भने, 'न अब बुहारीको हातगोडा लाग्ला न त घर ठडिएला !' उनी हुन् भीमदत्त । सुफलाका ससुरा । 'कान्छो छोराको सहारामा बसेको थिएँ, भूकम्पले लग्यो, कान्छी बुहारीको पनि यो हालत छ,' उनले भने, 'सहारा लिनुपर्ने बेलामा आफैं सहारा दिएर बँचाइरहेको छु,' उनले भने ।
मुच्चोक–६ कुसुन्डेका अधिकारीको घरमा ८ महिनायता सन्नाटा छाएको छ । भीमदत्त र उनकी पत्नी ७० वर्षीया मधुमाया कान्छो छोराको सहारामा बस्थे । तर, भूकम्पमा पुरिँदा छोरा हरिको मृत्यु भयो । बुहारी पनि च्यापिएर थला परेकी छन् । बुढेसकालमा अधिकारी दम्पतीको कन्तबिजोग छ । भीमदत्त बिहानै उठीओरी घरधन्दा सम्हाल्न लाग्छन् । भकारो फाल्छन्, भैँसी दुहुन्छन् । मधुमाया चिया, खाना, खाजा जोरजामतिर लाग्छिन् । सुफलाका छोरा प्रसून ७ वर्ष लागे । छोरी प्राप्ति ११ पुगिन् । दुवै जना घरनजिकैको विद्यालयमा पढ्छन् ।
हरि विद्यालयमा पढाउँथे । सुफला पनि शिक्षिका हुन् । वैशाख १२ गते मुच्चोककै चतुर्माला उच्च माविमा स्रोतकेन्द्रभित्रका विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम चलिरहेको थियो । दम्पती त्यही तालिममा थिए । विद्यालय भवन भत्किएर हरिको मृत्यु भयो । सुफला गम्भीर घाइते भइन् । सात महिनासम्म त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचार गराएर फर्केको महिनादिन मात्रै भयो । टाउको, शरीर र खुट्टामा चोट छ । घाउ अझै निको भएको छैन । उनी अहिले बैसाखीकै सहारामा घरनजिकैको ताराचन्द्र मावि पुग्छिन् । १५ मिनेटको बाटो पार गर्न उनलाई कम्तीमा एक घन्टा लाग्छ । उनी टुसुक्क बस्न सक्दिनन् । खुट्टा सर्न मान्दैन । बैसाखीकै भरमा पूरै कक्षा उभिएर पढाउनुपर्छ । 'विद्यार्थीको सहयोगले कक्षाकोठामा ओहोरदोहोर गर्छु,' उनी भन्छिन्, 'शौचालय जान–आउन मिसहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, लालाबालाको मुख हेरेर सकीनसकी जागिर खानै प¥यो ।'
घाइते भएपछि शिक्षा कार्यालयले उनलाई काजमा नजिकैको विद्यालय सरुवा गरिदिएको हो । पहिले एक घन्टा हिँड्दा पनि असहज नमान्ने उनलाई अहिले नजिकैको विद्यालय पनि कयौं कोस हिँडेभन्दा बोझिलो छ । त्यसमाथि हिउँदको चिसो टहरामा काट्नुपर्दा उत्तिकै सकस छ । 'खुट्टा नलाग्ने भो, घर भए पनि सरकारले छिट्टै बनाइदिए बस्न सजिलो हुन्थ्यो,' उनी आग्रह गर्छिन् ।
चिसोले घाउमा चस्का हान्छ । उनी टिन र त्रिपालको ओसमा दिन कटाइरहेकी छिन् । 'बिहान उठ्ने, सरसफाइ गरेर खाना खाने, विद्यालय जाने,' सुफलाले दैनिकी सुनाइन्, 'विद्यालयबाट फर्कंदा साँझ पर्छ, खाना खाने, सुत्ने मात्रै हो ।' घरधन्दा चाहेर पनि गर्न सक्दिनन् । वृद्ध सासू–ससुरालाई सघाउन नपाउँदा उनलाई पीडा हुन्छ । भीमदत्त राम्ररी आँखा देख्दैनन् । अघिल्लो बुधबार दिउँसो उनी टहराबाट धान झिकेर डालामा राख्दै मिलमा ओसारिरहेका थिए । छिमेकी दाजुभाइ उनलाई सहयोग गरिरहेका थिए । बस्तुभाउ, खेतबारी, बुहारीको हेरचाह, नातिनातिनाको स्याहार सबै जिम्मा वृद्ध दम्पतीको काँधमा थुपरिएको छ ।
भीमदत्तले छोरा मात्र होइन, नाति पनि भूकम्पमा गुमाए । जेठो छोराको छोरो । १० कक्षा पढ्दै गरेका विश्व अधिकारी घरैमा च्यापिए । सगोलको परिवार रमाइलो थियो । छिनभरमै भूकम्पले खुसी खोसेर लग्यो । दुईवटा कटेरा बनाएर अधिकारी परिवार भत्केको घरछेउमै बसेका छन् । चिसो भुइँमा गुन्द्री बिछ्याएर सुत्छन् । 'चिसोको पीडाभन्दा छोरानातिको यादले सताउँछ,' भीमदत्त भन्छन्, 'हामी पनि थला परेपछि बिचरी बुहारी र नातिनातिनालाई कसले हेरिदेला ?'
नरहरि सापकोटाLatest from
छात्रामा अनौठो लक्षण देखिएपछि विद्यालय बन्द
'बर्खा लागिसक्यो, घर कहिले पो हो'